Iyo Nhoroondo YeHentai, Uye Maitiro Akaita Izvo Zvese KuJapan - Zvimwe
Iyo Nhoroondo YeHentai, Uye Maitiro Akaita Izvo Zvese KuJapan
Munhoroondo yese, hentai rave riri rimwe remhando huru kwazvo kuve yakambovapo nemukurumbira wayo unoramba uchikura.
hazvishamise kuti sei iyi genre iri zvine mutsindo ndeimwe yemhando dzakakosha dzakambovapo munhoroondo yeanime, nekuti inokochekera mune vanhu kwete muJapan chete, asi nepasirese zvakare.
Vazhinji vanhu vanotarisa hentai seimwe yeayo zvinhu zvisina kujairika zvinoitwa neJapan, uye ini handikwanise kuvapa mhosva nekuda kweizvozvo nekuti IWEIRD SEI HERE!
Asi kuseri kwechinhu chimwe nechimwe chatinoona muhupenyu hwedu hwezuva nezuva pane nhoroondo kunyangwe ichinakidza kana kwete.
Uye ndiri pano kuzokuudza nezvenhoroondo yeimwe yeanonyanya kuzivikanwa maindasitiri evaraidzo eJapan.
Nhoroondo pfupi yeHentai - Kutanga
chii chinonzi slice yehupenyu anime
Kunyangwe kana pasina humbowo hwakakwana hwekubvisa kutanga chaiko kwe hentai, zvisaririra zvaro zvekare zvinogona kuve zvakanyorwa kumashure kune zana ramakore regumi nematanhatu kwayakatora chimiro chaShunga.
Shunga, chimiro cheJapan che unzenza, inofungidzirwa kuvepo kubvira panguva yaHeian (704 AD-1185 AD) neimwe nzira.
Kubva muzana ramakore rechi 16 kusvika ku19, mabasa eshunga akadzvinyirirwa neshogun kunyanya sezvo kutsikisa kwakave kwakakurumbira munguva yeEdo (1603-1868).
Iyo Tokugawa shogunate yakanangana nezvimwe zviitiko zvekuongorora senge chiKristu, kushoropodzwa kweshogunate neruzivo nezve zviitiko zveimba yaTokugawa.
Nekudaro, kutsikisa kwakawedzera kuoma nekuda kwekuchinja kweKyoho. Idzo kyoho shanduko dzaive marongero ehupfumi uye tsika tsika dzakatangwa neTokugawa Shogunate muna 1736.
Iyi shanduko yakanyanya kuomarara, inorambidza kuburitswa kwemabhuku ese matsva kunze kwekunge komishina weguta abvumidza.
Mushure mekuraira uku, ndizvo yakaenda pasi pevhu asi zvese zvakazowedzera pakavandudzwa Kansei (1798-1801).
Inotaura kuti chero chinhu chinoonekwa sechivhiringidza nzira yehupenyu, pamwe nemabhuku epamusoro, zvakawongororwa.
Uye pasi peiyo Tenpō shanduko (yakaunzwa mu1842) ese anodhinda mabhuroko ezvinyorwa, uye shunga, aive pakati peavo vakatorwa.
Kuenda muzana ramakore rechi19 mushure mekudzoreredzwa kweMeiji
Izvi zvakaratidzwa kuchinja kukuru kwezvematongerwo enyika muJapan.
Hurumende yakatanga kudzvinyirira zvakanyanya kune pfungwa dzekumadokero, zvinonyadzisira uye zvinyorwa zvezvematongerwo enyika zvinotsoropodza mambo weJapan nehurumende.
Censorship yakawedzera kuwedzera kubva panguva ino zvichienda mberi, kunyanya pakapasiswa kodhi yeCriminal yeJapan semutemo kwete. 45.
Muchitsauko XXII mhosva dzekuhura, kubata chibharo, uye bigamy, chinyorwa 175 chinoti:
“Munhu anogovera anotengesa kana kuratidza pamberi pevanhu gwaro rinonyadzisa, kudhirowa kana zvimwe zvinhu acharangwa nekuiswa mutirongo nebasa kwenguva isingapfuuri makore maviri. Faindi isingasvike 2,500,000 yen kana faindi diki.
Izvi zvinoshandawo kumunhu anazvo zvakafanana nechinangwa chekutengesa. ”
Zvino, mutemo uyu wakasimbisa kurambidzwa kwekuve nekuparadzira zvinhu zvinonyadzisira, kusanganisira hentai kunyanya uye zvinongowedzera HERE kubva pano.
MaBygones ehondo yePacific
Kudzoka muna 1928 Chirango cherufu chakawedzerwa kune kumwe kutyorwa kwemimwe mitemo.
Pakupedzisira, izvi zvakaenderera mberi kune iro ruzivo uye dhipatimendi rekuparadzira richikwidziridzwa kune bazi reruzivo muna 1940.
Gore rakatevera nekuda kwekutya kwakakonzerwa nehondo, kudzokororwa kwemutemo mutsva wekuunganidza kwakabvisa zvachose rusununguko rwekutsikirira zvachose.
Izvi zvinoreva kuti hapana munhu anogona kugovera kana kutengesa chero chinhu pasina mvumo kana mvumo kubva kuhurumende kana mambo.
Pepa rega rega rinofanirwa kuongororwa nehurumende isati yaburitswa. Izvi zvese zvakaitika nekuda kwekumanikidza kwakaunzwa nehondo yePacific uye kunetsekana kwese kuri kuitika muEurope nepasirese.
Kuenderera mberi kuzvipira kuJapan uko kwakaziviswa naMambo Hirohito Musi waAugust 15, 1945 uye zvakasainwa zviri pamutemo musi waGunyana 2, 1945.
Mushure mekuzvipira kweJapan, mukuru mukuru wenyika dzose dzakabatana, General Douglas MacArthur akabvisa mhando dzese dzekudzivirira uye nerusununguko rwekutaura.
Izvi zvakashandiswazve kudzoserwa kubumbiro reJapan muChitsauko III.
Kodzero nemabasa evanhu, chinyorwa 21 chinotevera
“Rusununguko rwekusangana pamwe nekuwadzana, pamwe nekutaura, kudhinda neese mamwe maitiro ekutaura, anovimbiswa. Hakuna kudzivirirwa kunofanirwa kuchengetedzwa, uye zvakavanzika zvechero nzira yekutaurirana hazvityorwe ”.
Nekudaro, kudzvinyirira kwevezvenhau kwakaramba kuri kwechokwadi munguva yepashure pehondo, kunyanya mune zvematongerwo enyika.
Asi nekuda kwebumbiro reJapan, indasitiri yese yezvinonyadzisira, pamwe neindasitiri yese yevaraidzo yakatora mukana wakakura nekuda kwenyaya dzekudzivirira.
Asi iwo unenge uri musoro wenyaya inotevera.
Mushure mehondo yePacific ye porno zvinyorwa pamwe neve Press zvinyorwa vakapedzisira vasununguka kuita chero chavanoda.
Kunyangwe paine zviripo zvirambidzo its good kuti ivo havana kuomarara sepakutanga.
Zvino nebumbiro riri kumashure kwavo, veJapan vezvenhau uye indasitiri yevaraidzo seyakagadzirira kutanga zvakare.
Yakakura, Zvirinani uye zvechokwadi yakatsunga kupfuura nakare kose.
Nekuda kwekukanganiswa kwemifananidzo yezvinonyadzisira mu19th uye 20th century, iwo akajairwa manga mifananidzo kumashure ipapo inoratidzwa neanoratidzika kunge echokwadi mavara.
Asi Osamu Tezuka akatsanangura kutaridzika kwemazuva ano kwemanga naAstroboy wake, uye mamwe mabasa uye akazonzi 'Mwari weManga'.
Iye zvino madingindira evakuru mum manga anga aripo kubva kuma1940 asi zvimwe zvezviratidziro izvi zvaive zvechokwadi kupfuura vatambi vemikopoketi vakakurumbira naTezuka.
Kusvetukira muna 1979
1979 ndipo apo Azuma Hideo's Cybelle dzakaburitswa.
Hideo's Cybelle yakatsanangurwa iyo indasitiri yeHentai nekuve chimwe chezvikonzero, kana pamwe kunyangwe chikonzero chaicho chekuchinja kwemaJapan ezvinonyadzisira.
Kubva pane chaicho kune vatambi-vakaita sekatuni. Nekuda kweCybelle yake, yekuona zvinonyadzisira manga kufamba kwakatanga izvo, gare gare, kuzoona iyo lolicon boom yema1980 nekukwira kwemagazini senge anthologies 'Lemon vanhu' uye 'Petit apple pie'.
Mhedzisiro yekudyidzana kwenyika uye Hentai
Nemagariro ekugadzirwa kwema1980s, masimba ekuziva nezve kukurumidza kudyidzana kwepasi rose pamwe nekurumbidzwa kwakakurumbira kwemitambo yekutamba, nyaradzo nemakomputa emunhu…. Iyo indasitiri yezvinonyadzisira yakanga isina chekuita asi kukura pamwe nenyika.
Kuwanda kwekuchinja kwekuona zvinonyadzisira kwema1980's, inowanzozivikanwa seA / V (Vhidhiyo yeVakuru) yakatengesa mamwe mavhidhiyo nekuti mhuri zhinji dzechiJapane dzaive dzave neanenge maviri terevhizheni uye maVCR.
Zvinova zvinoda munhu wese. Iri mugore ra1984 apo Lolita anime akateedzana anoburitswa. Iyo inowanzozivikanwa seyekutanga eerotic anime ( Hentai sezvatinoidaidza) uye yekutanga Vhidhiyo Kugadziriswa (OVA).
Iyo Lolita anime akateedzana akagadzirwa nekuda kweiyo lolicon boom yema1980. Izvo zvakare muna 1984 kuti iyo Cream ndimu franchise yemabasa yakatanga.
Saka zvese mune zvese, maVCR uye maseti eterevhizheni akaita basa rakakura mukutarisa kwe hentai uye zvimwe zvinonyadzisira kumashure mumazuva.
Zvino ngatitaurei nezvazvo mitambo inokwezva, inowanzozivikanwa se 'Eroge'.
Isu tese tinoziva kuti ma1980s inguva iyo mitambo yemavhidhiyo uye arcade mitambo ndiyo inonyanya kufarirwa.
Uye nekusimuka kwe mutambo indasitiri yakauya kusimuka kwemacomputer emunhu. Ipo indasitiri yemakomputa yeJapan yaive ichinetseka kuwana chiyero chemakomputa nevagadziri vakaita seNEC, SHARP, uye FUJITSU vachikwikwidzana.
Iyo PC 98 yakateedzana, kunyangwe ichishaya simba rekugadzirisa, maCD anotyaira uye mashoma Graphics, yakauya kuzotonga musika nekuzivikanwa kwe eroge kubatsira pakubudirira kwayo.
Kududza eroge yekutanga ndeyekuzviisa pasi, sezvo zvakaoma kunyatso kuziva zvakatanga kutanga.
Nekuda kwedudziro dzisina kujeka dzechero ipi eroge , isu tinofanirwa kuvimba nemhando dzakasiyana uye tsananguro.
Nyoro porn Adventures - Chekutanga mune Zvevakuru misoro yakaburitswa muAmerica yeAPLELE II.
Hupenyu Hweusiku - Kana eroge ichitsanangurwa seyekutanga mifananidzo yemifananidzo yevakuru veJapan saka iyi ndiyo yekutanga. Yakaburitswa muna 1982 naKOEI.
Tenshitachi no gogo - Yekutanga anime-yakanyorwa eroge yakaburitswa muna 1985 naJAST.
Nyongano Ngirozi - Yekutanga eerotic-kutamba-mutambo. Yakaburitswa na ASCII
Kufambira mberi kubva mumitambo. Zviri mukupera kwema1980 uko musika weDoujinshi (Woga-wakaburitswa mabasa) musika wakawedzera uye zvinofungidzirwa kuti inenge hafu yemusika wayo une zvinonyadzisira.
Zvinetso zvekopiraiti Dambudziko pamusika zvakadaro musika weDoujinshi inzvimbo yakajairika yekuti munhu atange asati aita kutanga mumagazini yehunyanzvi.
iri zvakare mukupera kwema1980 iyo imwe yezvinonyanya kunetsa svinu anime yakagadzirwa. Urotsukidoji La Blue Musikana inoburitswa muna 1989 naToshio Maeda.
La Bhuruu Musikana Vol 1 & 2 Tanga kutenga Dzidza ZVIMWE Isu tinowana komisheni kubva kuAmazon & nevamwe vanobatana kana iwe ukatenga kutenga pasina imwezve mari kwauri.
Inoburitswa neCentral park midhiya muna 1993. Kazhinji inotaurwa seanime iyo yakakurisa iyo tende rekubata chibharo.
Pakaburitswa iyo firimu muUS yakatsanangurwa seye 'Yakadonhedzwa mumifananidzo yakajeka yehupombwe hwakashata uye chisimba-chisimba'.
Yakanga yakarambwa zvachose neUK's 'censors uye inorambidza kugoverwa'.
Kutaura nezvema sensors ngatikurukurei nezvekudzivirira.
Sekusimuka kweindasitiri yezvinonyadzisira muJapan kubvira kubvira ma1970, kudzvinyirira kwagara kuri mutambi mukuru muindastiri.
Izvi zvinodaro nekuti kuti uwane purofiti kana kushambadza mabasa ako unofanirwa kupfuura nemitemo isina kujeka ye Japani.
Ngatitangei neChitsauko XXII, Chinyorwa 175 chemutemo wematsotsi weJapan unorambidza kuburitswa kwezvinhu zvinonyadzisa.
Kusangana pabonde kwemurume nemukadzi uye vhudzi repaburi zvinonyanya kutarisirwa sekusvibisa (ndosaka mazita mazhinji achigadzirwa aine zvishoma zvemuviri).
Nekudaro, nekuda kwebumbiro reJapan (Chinyorwa 21) icho chinobvumidza kutaura kwakasununguka uye rusununguko rwekutsikirira izvo zvinopesana nekodhi yematsotsi. Asi nekufamba kunoita nguva nekududzirwa kwemitemo iyi miviri asi uchangobva kuitika iko kuri kuisa dhijitari mosaic pamusoro pejenitalia.
Mimwe yemienzaniso iyi ndiyo kudzikatidza madota uye mwenje pamifananidzo ichiripo.
Muna 1986, Toshio Maeda 'Mwari we hentai hentai' akatsvaga kutora nguva yapfuura pakurara pabonde nekushandisa zvikara uye tende.
Izvi zvakatungamira mukuburitswa kukuru kwemabasa ane marobhoti, zvikara, matende… nezvimwe. Yavo genitalia yaitaridzika kuva yakasiyana zvakanyanya kune genitalia yemunhu, iyo yaibatsira kutenderera mitemo yekudzivirira.
Ndiyo mitemo iyi izvo zvakaita kuti yekutanga hentai ishande zviri pamutemo kupinza uye vaive vekutanga vakabudirira.
Mazhinji mavhidhiyo anogadzirwa ndeesangano rine hunhu rinosarudza kuti zvinogamuchirwa here kana kuti kwete.
Iyo Nihon Ethics yeVhidhiyo sangano, uye iyo Ethics Sangano reComputer Software ndiyo mienzaniso yesangano iri.
Asi matambudziko haamire pano nekuti iwe uchiri kufanira kufunga nezve musoro webasa rako, semuenzaniso, vhidhiyo nezve '18 makore ezera vasikana bonde bonde!' inogona kutumidzwa se '1x yemakore bonde bato!' kunzvenga kutyora mutemo.
Kunyangwe nekutyisa kunoita mutemo sekunge kwave nevashoma vanhu vakasungwa zvichienderana nemitemo iyi.
Kutongwa kwazvino uno kutongwa kwe Suwa Yuuji yeiyo Hentai manga: Misshitsu.
Pakutanga akaripiswa faindi yemazana mazana mashanu ezviuru uye akadzivirirwa nguva yejeri nekukumbira mhosva.
Paakakwidza nyaya yacho kuDare Repamusorosoro reJapan nenyaya dzekuti manga anga asiri asina hunhu uye akajeka sezvinhu zvakawanda pa internet, faindi yake yakapetwa katatu kusvika kumamiriyoni 1,5 yen!
Zana remakore rechi21 pamawadhi
Chinyorwa chitsva mushure mekuvhara.
Muna 2005, A.D zviratidzo hentai chitaridzi Yakapfava cel mifananidzo kuvhara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, uye muna 2008 - Central park midhiya.
Mumwe wevakuru vepamutemo vehentai vanogovera muAmerica vakamhan'arira kubhuroka.
Kunyangwe nekutanga kwakashata kwakadai, ma2000 akafamba nechikepe zvakanaka nemazita akanaka akadai se:
Izvi zvakava chimwe chevakakurumbira Hentai mazita e2000's.
Kusvika pari nhasi, Hentai rudzi rwuri kukura nekukurumidza urwo rwuri kutungamira muganhu wevaraidzo yemazuva ano uye irikuratidza kuti hapana zviratidzo zvekumira.
Iine vateereri vakapamhama uye vakasiyana-siyana vanoda kusarudzwa kuri nani uye kwakapamhamha kwemazita uye akasimba uye fetusi dzinosimba, hazvishamise kuti hentai yakava chimwe chinhu chinopfuura 'kubvisa' zvinhu.
Uyu mutambo unosanganisa pfungwa yemitambo-yekutamba mitambo (RPG) neerotica. Iko iwe kwaunokwanisa kugadzira yako wega varidzi iwe uchiri pazviri.
Kutanga Kutamba Izvozvi Dzidza ZVIMWE Isu tinowana komisheni kubva kuAmazon & nevamwe vanobatana kana iwe ukatenga kutenga pasina imwezve mari kwauri.
Iyo Nhoroondo Yezve Nendoroid Hunhu: Ngatidhonze Kuti Vazove Vakanaka Sei Uye Vanozivikanwa
29+ Lewd Anime T Shirts Hentai Vatengi Vachada
12+ YeVakuru veAnime Vanababa Waakamboona
7 Mei Misaki Anotorwa Kubva kune Imwe Inoenda Yakadzika
Anime Firimu Mugadziri: Hiro Matsuoka Pane Demon Slayer's Movie Kubudirira MuJapan
Uyu Mukomana Ndiye ANOGONESESA Akavimbika Anime Hunhu Unozomboona (Heino Chikonzero)
Japan's NEW Manga Copyright Mutemo Uripo Mukubata Nhasi, Asi Zvakadiniko Nezve Anime?
40+ Bhuruu Exorcist Makotesheni Anozokonzeresa Iwe Manzwiro
KissAnime's So Famous Zviri #Trending paTwitter Mushure meVaridzi Vekodhi Tora Izvo
Muunganidzwa WeZvakanakisa Toriko Makotesheni Ekukubatsira Iwe Kurangarira Iyo Anime!
50+ Yeiyo Yakakura Kuroko Hapana Bhasiketi Makotesheni Anozosimudzira Kukurudzira Kwako
Hasha Shamwari Inoisa Bleach Manga pamoto Mushure meTite Kubo Senge Inoshoropodza Jujutsu Kaisen Hunhu.
pamusoro gumi chidimbu chehupenyu anime
kupi yekutarisa chirungu chinonzi anime